PEACEFUL PA: December 2011
ကယ်တင်ခြင်း - Do or Done?
ကယ်တင်ခြင်း - ( Do or Done? )
လူတိုင်းက တနေ့တော့ သေကြရမှာပဲလေ။ အဲဒီပြေးမလွတ်တဲ့ သေခြင်းတရားကို ရင်ဆိုင်ရရင် ငရဲတော့ ဘယ်သူမှ မသွားချင်ဘူး။ ကောင်းတဲ့နေရာပဲ ရောက်ချင်ကြတာပါ။ ငရဲဆိုတာ မကောင်းတာတွေအများကြီးလုပ်၊ တသက်လုံး နောင်တမရ၊ ဘာတခုမှ အကောင်းမလုပ်သူတွေ ရောက်မှာလို့လည်း ထင်တတ်ကြပါတယ်။ တကယ်တော့ ငရဲသွားဖို့ဆိုတာ အပြစ်အများကြီးလုပ်ဖို့ မလိုပါဘူး။ တခုဆိုရပါပြီ။ `အပြစ်တခုရှိလျှင် ဒဏ်ခံစေ။´ အပြစ်တခုမှ မရှိတဲ့လူရယ်လို့ လောကမှာမရှိဘူး။ လူဆိုတာ အမိဝမ်းထဲကတည်းက အပြစ်လုပ်တတ်တဲ့ ဗီဇကို ရထားပြီးသားပါ။ အပြစ်အနည်းအများသာ ကွာမယ်။ လူတိုင်းဟာ အပြစ်နဲ့ မကင်းကြပါဘူး။ အဲဒီတော့ သေရင် ငရဲသွားဖို့ သေချာနေတာပေါ့။
အဲဒီတော့ ဘယ်လိုလုပ်မလဲ? ဘယ်တိုင်းပြည်ကလူကိုပဲ မေးမေး.. `ကောင်းတာလုပ်ရမှာပေါ့´ လို့ပဲ ပြောကြမှာပါ။ ကောင်းတာလုပ်တာဟာ မကောင်းတာတွေ လုပ်နေတာထက်တော့ ပိုကောင်းတာပေါ့လေ။ လူက ကောင်းတာနဲ့ မကောင်းတာကို ချိန်လို့၊ ကောင်းတာများရင် ကောင်းတဲ့အရပ်ရောက်မယ်လို့ အလွယ်ထင်တာပါ။ တကယ်တော့ ကောင်းတာနဲ့ မကောင်းတာဟာ ချေလို့မရပါဘူး။ သပ်သပ်စီနေကြတာပါ။ လူလုပ်တဲ့ ကောင်းမှုကုသိုလ်ဆိုတာ သန့်ရှင်းတဲ့ ဘုရား မျက်စိတော်ရှေ့မှာ လက်ခုစုတ်ပါ။ လူ့လောကမှာပဲ ကြည့်ပါဦး။ မကောင်းတာတွေ တောက်လျှောက်လုပ်ပြီးမှ လူတွေအကျိုးသယ်ပိုးပါမယ်.. ပြစ်ဒဏ်မချပါနဲ့ဆိုရင် ဘယ်တရားပါ့မလဲ? အပြစ်ကြွေးဆိုတာ ပေးဆပ်ရစမြဲပါ။
ဘယ်လောက်ပေးဆပ်ရမလဲ? အပြစ်ကို ကြေအောင်ဆပ်ရရင် သေဒဏ်ပါ။ ကျွန်တော်တို့ လုပ်ခဲ့သမျှ၊ အခုလုပ်နေသမျှ၊ နောင်လုပ်မိဦးမယ့် အပြစ်တွေကို ပေါင်းရင် အမြင့်ဆုံးပြစ်ဒဏ်က သေဒဏ်ပါ။ ဒီဒဏ်ကို အားလုံးအတွက် ပေးဆပ်ဖို့ ကောင်းကင်ကဘုရားက သူ့သားတော်ကို လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၂၀၀၀ လောက်က လူ့လောကကို စေလွှတ်ခဲ့ပါတယ်။ သားတော်ကို လူနာမည် ပေးတဲ့ အခါ `ယေရှု´ လို့ မှည့်ပါတယ်။ အဓိပါယ်က `ကယ်တင်မယ့်သူပါ´။ ကယ်တင်ရှင်က အစပထမမှာ တရားတွေဟောပါတယ်။ မေတ္တာပါ။ ကိုယ့်အပေါ်မကောင်းတဲ့သူတွေ၊ ရန်သူတွေအပေါ်မှာတောင် မေတ္တာထားဖို့ ပြောတာပါ။ ဒါပေမယ့် ကောင်းတာတွေ ပြောပြရုံနဲ့ လူတွေအတွက် မလုံလောက်တော့… အလုပ်တခု လုပ်ပေးရဦးမယ်။ အဲဒါကို မလုပ်ပေးရမချင်း - ငြီးငွေ့နေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အဲဒီအလုပ်က- ဘာလဲ?
အားလုံးကိုယ်စား အသေခံပေးဖို့ပါ။ ဘုရားသားတော် အသေခံတဲ့ ကားတိုင်ဆိုတာဟာ တကယ်တော့ လူဆိုးတွေ အပြစ်ရှိသူတွေ နေရမယ့် နေရာပါ။ ကျွန်တော်တို့ကို အပြစ်ပေးရမယ့်နေရာပါ။ သူက လူစားထိုးပေးခဲ့တာပါ။ အဲဒီလို အသေခံချိန်မှာ အသက်စွန့်ခါနီး နောက်ဆုံးစကားတခွန်းပြောခဲ့ပါတယ်။ `အမှုပြီးပြီ´။ အပြစ်ကြွေးတွေကြေပြီလို့ ပြောတာပါ။ အကြီးမားဆုံးပြစ်ဒဏ်ကို ပေးဆပ်ပြီးပါပြီ။ ဒီထက်ဘာမှ လူလုပ်တဲ့ မဖြစ်စလောက်တွေ ပေးစရာမလိုပါဘူး။ ဒါကြောင့် ကောင်းကင်ရောက်ဖို့ အားလုံးလုပ်ပေးခဲ့ပြီ၊ “It is finished” လို့ ပြောခဲ့တာပါ။ ကောင်းကင်ဆိုတာ တကယ်တော့ ဘယ်သူမှ မရောက်ထိုက်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဘုရားက အဖေမဟုတ်လား? ကယ်တာပေါ့။ ရအောင် တရားသဖြင့် အသေခံပေးခိုင်းလိုက်တာပေါ့။ ဒါကို လက်ခံတယ်။ မငြင်းဘူးဆို အကယ်ခံတာပါပဲ။ ဘုရားကယ်တာကို လက်ခံတာနဲ့ ဘုရားက ကယ်လိုက်ပါပြီ။ ဒီလောကကြီးသာမကပါဘူး။ ကောင်းကင်နဲ့ ငရဲဆိုတာလည်း ဘုရားလက်ထဲမှာပဲမဟုတ်လား?
ကောင်းကင်ရောက်ဖို့ လူတွေက `တခုခုလုပ်ဖို့´ Do လို့ ပြောနေမှာပါ။ ဘုရားသခင်ကတော့ `ငါလုပ်ပေးပြီးပါပြီကွာ´တဲ့။ Done ပေါ့။ ကဲ.. ကောင်းကင်ရောက်ဖို့ ကောင်နိုးရာရာလေးတွေ လုပ်ရဦးမှာလို့ ထင်နေသေးလား? Do နေတာပေါ့။ အမှန်က Done ပြီးသွားပါပြီ။
သခင်ယေရှုဟာ အသေခံ၊ သဂြိုဟ်ပြီးလို့ ၃ ရက်မြောက်နေမှာ အသက်ရှင်ပြန်ခဲ့ပါပြီး။ လူတွေကို လိုက်လံ နှုတ်ဆက်ပြီး ရက် ၄၀ အကြာမှာ ကောင်းကင်ကိုတက်ကြွခဲ့ပါပြီ။ လူတွေကို ကောင်းကင်က စောင့်နေပါပြီ။
ဒါကြောင့် အခုလို ရိုးရိုးလေးဆုတောင်းလိုက်ပါ။
ကောင်းကင်စာရင်းမှာ နာမည်လေး ရေးမှတ်ပေးပါ´။
Posted by Papa at 1:23 AM